Jirraatota North West Iowa jiraatanif maagala Sioux City keessati qoranno TestIowa wiyxata irra akka | KWIT
Iowa keessatti namni coronavirus qabame haarayni 9,700 taree jira.
Governor akka jetteti namni haarowni coronavirus qabame 85% magaala 22 keessatti argaman ufi eeganno cima gochu qabanni keessatu kan maagala Woodbury county keesati jiran.
Manni fayya Sioux land akka gabaaseti magaala Woodbury kessati namni harawni 94 qabamu isaa waliigalati namni coronavitus qabame 1,250 yoo ta’u dutii immo 2.
Qabataaman kan bekkame namni qabame Dakota County keesatti 1,000 yoo ta’u, harawni nama 25 akkasumaas kaa du’e nama 2.
Magaala Nebraska keessatti namni coronavirus qabame guyyaa jimaata akka himametti 4,800 yoo ta’u waliigalatii kara nama 6,000 gahee jira.
Namni 2 dabalataan du’e, waliigalati namni du’e 78 gahee jira.
Namni dhukuba Kanaan qabame kanaa oli ta’uun shakame, sababiinis umani baay’ee waan hin qoratimanif haganaa jennee himu hindandeenyu. Akkasumas namni gariiin qabamuus malattoo dhukubaa waan hin muldhisneef hinbekamu.
Guyyaa 3 darbe kan magaala south Dakota keessati akka duutti hin jire himan. Garuu namni 21 sababa coronavirus du’ee jiraa. Namni haarawna qabame 21 yoo ta’u waliigalati nama 2,600 gahee jira.
Kampani pork ka Sioux falls kessa jiruu waraa jalqaban kampani banuu heduu, garuu kampanichi jaraa akka biyyaa Amerika keessati warra dalaydoni isaani akka jiruun baay’inan qabamuun tokkofaa beekamanidha.
Kampanin Smithfield Foods erga hojattoni isaa 800 qabaman booda torbaan lamaf kampanichi cufaa tureera.
Department lama garuu wiyxata bannani jiru.
Tyson kan Dakota City keessatti argamu kampanii issaa dur kibxata banuu hedu, amma hinbannu jedheera.
Haasawan Tyson akka Sioux land public media guyyaa irrati oduu keneti, “fayyaa fi nageenya hojatoota keena ttu jalqaabaati kanaafu itti gaafatama kana ni fudhanna. Hojattoota 4,300 tiif qorannaa guddaa godhaa itti fufna, kanaafu Tyson kaa magaala Dakota City yeroodhaf akka cufamu murtese.
Hojattota keenna achi dalaguu hundafu wayta dalagaa jalqabamu hin beeysisna haa ta’u malee akkata qorano hojatoota keenattiin deemna jedhan jiru.